Hunhu huri pakazara disarray. Sezvo isu tichifambira mberi kubva kuDombo reZera kusvika kunguva yemazuva ano, isu takawana zvinoshamisa zvehunyanzvi hwekuita. Pnguva imwechete, isu takasarirawo kumashure kwechimiro chekushungurudzika kunotibata sekufambiswa pasina chero chakapfuura, chiripo kana remangwana. Nhare mbozha ndeimwe yekuita tekinoroji kwatinoona tese sekubudirira nekutuka. Nei zvakadaro?
Ngatitange kupindura uyu mubvunzo, uye tobva taenderera mberi.
Nhare mbozha dzakachinja nzira yatinotaura. Hongu, miganhu yenzvimbo yakadzimwa, uye zvinongotora nguva shoma kuti ubatanidze, uye utaure nevadiwa padyo, uye kure. Icho chigadzirwa chehunyanzvi hwekudyara kunotiparadzanisa kubva kune mamwe marudzi ese emhuka paPasi. Kufambira mberi kwehunyanzvi hwekutaurirana nehunyanzvi ikozvino kwatibvumidza kutora nguva, uye kugadzira ndangariro; tevedza zvido zvedu zvehutano; kubatana neshamwari, uye mhuri kuburikidza neredhiyo mapuratifomu; kuuraya kusurukirwa kuburikidza nenziyo, nemavhidhiyo, uye nemitambo! Hupenyu hwedu nharembozha dzedu dzave kubatidzana zvekuti dzinoratidzika kunge dzisingaparadzanisiki.
Kana nharembozha dzakadaro bhuru kune vanhu saka vanouya sei kutuka? Mubvunzo wakanaka. Pane zvikonzero zvakawanda. Tinogona kupeta zvishoma.
Tava kuita zvisina hukama. Kupindirana kwevanhu kuri padiki. Hunhu huri kurasikirwa kubata kwevanhu.
Nhare mbozha dzave chishandiso chekushungurudza vanhu. Nhare dzekushungurudza dzawanda.
Nhare dzanhasi dzinogona kurekodha mavhidhiyo. Vanhu vanowanzoshandisa zvisiri izvo kugona kwevhidhiyo kurekodha, uye kutora mavhidhiyo evanhu vari pakukanganisa zvinzvimbo. Munoziva kwatiri kuenda, handiti?
Zvinhu zvinopesana uye ma goons anogona nyore uye nekukurumidza kutaurirana nemumwe, uye kuita zviitiko zvinokuvadza munharaunda.
Rondedzero yacho inogona kuenderera mberi nekuenderera mberi. Hatisi pano kukurukura izvozvo. Tauya kuzokurukura nhamba yefoni tracking. Rutivi rwakasviba rwefoni mbozha runowanzoita kuti tifungidzire nezve mukana wekutsvaga nharembozha.
Chii chinonzi mobile phone track?
Mumutauro uri nyore kwazvo, nharembozha kutevedzera zvinoreva kutsvaga nzvimbo yenhamba yakati. Izvo zvinogona zvakare kureva kutsvaga foni pachayo. Semuenzaniso, kana ukafonerwa kutyisidzira, hauzodi here kuziva kwawakatangira kudanwa uku? Uchade here, haudi kuziva kuti ndiani akakudana? Ehe, pane iyo yakazara nhamba yezvikonzero izvo iwe zvaungade kutevera nhamba yefoni. Ngatimboongororai zvikonzero zvacho muchidimbu.
Chinangwa chekutsvaga kwefoni manhamba
Muchikamu chino, tichaenda patafura. Itafura inogara iri nyore kunzwisisa uye nekurangarira. Ngatitangei.
Yakarasika foni Nhare mbozha (kunyanya mafoni) anodhura. Kurasikirwa nefoni kuchareva kurasikirwa kwemari. Zvakare, mafoni ane data rakawanda kusanganisira mapikicha, mavhidhiyo, mapassword, data rezvemari, nhamba dzekutarisana, mameseji anokosha uye zvimwe. Paunenge uchinge warasikirwa nefoni, iwe unenge warasikirwa zvese data pafoni. Pakadaro, zvinongwara kutsvaga foni. Nzira iri nyore ndeyokutarisa nzvimbo yenhamba. Iyo inogona kukuudza iyo chaiyo nzvimbo yefoni kupihwa iyo foni haina kudzimwa.
Kubiridzira kufona Kubiridzira kwemari kunozivikanwa. Imwe yedzimwe nzira dzakapararira dzinoshandiswa nevanobiridzira ndeyekufonera vanhu vasingazvikudzi uye nekubvunza nhoroondo yebhangi kana kiredhiti / kadhi rechikwereti. Vanyengeri vanotevedzera sevashandi vekubhangi uye vanofona kuti vaburitse mapasita, mapini eATM, nezvimwe. Kana ukatambira foni yakadaro uye uchibatwa nehunyanzvi hwemitambo yakadaro, haungafarire kuziva nezvekwavari vanhu ivavo uye uvaunzire kururamisiro, uye kudzoreredza zvese kurasikirwa kwemari?
Kurwadzisa kufona Kuridza nhare kune njodzi. Dzimwe nguva kufona kwakadaro inongova pranks, asi vanouya nemubhadharo wakakura kune unogamuchira mafoni akadaro. Dzimwe nguva, kufona kwakadaro kunongova kunotyisa uye kunouya sekutyisidzira kwechokwadi. Semuenzaniso, munhu bhizinesi anogona kugamuchira kushungurudzwa mafoni kubva kune goons vanoda mari. Vanhu vanoita zvekufona dzakadai vane njodzi vasingaremekedzi hupenyu hwevanhu. Zvekare, pane zviitiko apo vasikana vadiki vanowana mafoni ekushungurudzwa kubva munzira yemuRomeos kana zvikara zvebonde. Kutsvaga avo vanoshusha kwakakosha.
Zvakavanzika zvebhizinesi Bhizinesi riri rose pamusoro pemakwikwi akaoma. Kupererwa nezvakavanzika zvebhizinesi rako kune mukwikwidzi wako zvinogara zvichikuvadza kune rako bhizinesi. Kazhinji vashandi veimwe bhizinesi vanogona kuendesa rumwe ruzivo rwakakosha kune bhizinesi rinokwikwidza neicho chiokomuhomwe. Kutsvaga mabasa evashandi, kunyanya mafoni, SMS, nezvimwe zvakakosha. Kutsvaga nhare mbozhanhare mune zviitiko zvakadaro kungave kuri madikanwa.
Kusatenda Zvakanaka, iwe unoziva izvi. Izvo hazvidi chero tsananguro. Ingoedza kutsvaga mhinduro kumubvunzo uyu - 'hauzodi here kuziva kuti mukadzi kana murume / mukomana / musikana wako ari kuita bonde nemumwe munhu here kana kuti kwete? Imwe yedzakareruka uye yekuenda-nzira ndeye yekutarisisa nhamba yefoni kuti uzive nezvekwaari. Imwe nzira ndeye iyo yekutarisa mafoni zviitiko sekutarisa mafoni efoni neSMS.
Kuchengeta ziso pavana Nguva dzakashata. Vana nhasi vava vanonyanya kutyisa kupfuura kunyange nechizvarwa chakapfuura. Chakatonyanya kuipa ndechekuti, vana nhasi varohwa zvakanyanya nechisimba, kusekerera (kwese), kuita mitezo, nezvimwewo zvazova nyaya yevabereki. Ehe, mafoni nenhau dzezvemagariro vanoita basa rakakura kuisa vana munzira yekukuvara. Kutsvaga mafoni avo uye kuziva kwavari iko kudonhedza kwetsitsi kune vabereki.
Njodzi yakasikwa Njodzi dzinongoitika dzoga dzinogona kuuya chero nguva munzira yemafashama, dutu, kudengenyeka, kudengenyeka, tsunami, nezvimwe. Zviratidzo zvakadai izvi zvinotyisa, uye kazhinji hazvingori mhosva yekudaidza mazana nemazana ezviuru zvehupenyu asiwo vanoparadzanisa vadiwa. Kana avo vanoparadzaniswa vachiri vakatakura runhare, zvinogona kuva nyore kuwana kwavari nekutevera mbozhanhare yavo.
Panogona kuve nezvimwe zvikonzero sekutsvaga mabasa ehugandanga uye ematsotsi. Nehurombo, mune zviitiko zvakadaro, inogara ichisimbisa mutemo. Vanokundwa vanogona kungonyunyuta kune vane masimba akakodzera. Kutsvaga mafoni mafoni kana SMS inoramba iri pasi pehutongi hwemutemo.
Tinoda kutaura kuti kunyangwe zvimwe zvezvinangwa zvakataurwa patafura iri pamusoro, zvinowanzo fanirwa kutora mvumo yekusimbisa mutemo pamwe neayo wemunhu waunoda kutevedzera.
Zvino zvauri kuziva nezvezvinangwa zvefoni yekutevera, inguva yekutarisa kuti zviitiko izvi zvekutevera zvinoitika sei. Tichabata ne 'foni yakarasika' mamiriro zvakasiyana. Sezvaunoverenga, iwe uchanzwisisa chikonzero nei tichizoparadzanisa nyaya yacho kubva kune mamwe mamiriro ezvinhu. Verenga uenderere mberi.
Kutsvaga foni Yakarasika
Paunorasikirwa nefoni, chii chinoitika? Zvinhu zviviri zvinogona kuitika. Izvo zvinhu zviviri izvi:
Iwe unongoerekana warasa kumwe kunhu, kana kuichengeta kumwe kukanganwa.
Mumwe munhu anoba foni yako.
Chero zvazvingave, iwe unorasikirwa nefoni yako. Iwe unowana sei foni yako mune zvese zviri zviviri kesi?
Iwe unofanirwa kunzwisisa masimba eaya mamiriro maviri. Yokutanga yakaoma kunzwisisa kupfuura yechipiri. Ngatitarisei mamiriro ega ega panguva.
Iwe netsaona unokandira foni yako kumwe kunhu kana kuikonzera
Kana iwe ukadonhedza foni yako kumwe kunhu uchifamba kana kuenda, mikana yekuwana foni uri wega ishoma. Nekudaro, hazvireve kuti hauzouwane zvachose. Zvinhu zvakawanda zvinogona kuitika pano se:
Unodonhedza foni, uye mumwe munhu anoiwana. Munhu iyeye anogona kunge ari munhu akanaka. Munhu wacho anogona kufonera mumwe wevanhu vaunofona pafoni yako uye oedza kuidzosera. Munhu wacho anokwanisa kuendesa runhare kukamba yemapurisa iri padyo. Munhu wacho anogona kunge asiri akanaka. Iye anogona kusarudza kuisa foni.
Unodonhedza foni kumwe kunhu, uye hapana anoona. Izvo zvinogara zvakavanzika pamberi pevanhu vese.
Chii chinoitika mune izvo zvataurwa pamusoro?
Izvi ndizvo zvinoitika:
Iwe unodzoreredza foni yako nekuda kwekuti munhu akanaka akaiwana uye, neimwe nzira, kana imwewo, munhu anokubata iwe (zvimwe kana kana nemapurisa) kuti adzorere foni kwauri. Mamiriro acho ezvinhu anowanzoita asi asiri anokwanisika. Vamwe vanhu vakanaka, uye havadi kuchengeta zvinhu zvisiri zvavo.
Kana munhu wacho asina kunaka, uchave nenguva yakaoma. Foni inowira mumaoko akashata yakafanana chaizvo nemunhu arikuba foni yako. Iwe hausi kuzochiwana nyore, kana kuti ungangorega kuchidzoka zvachose. Iwe unofanirwa kuzvigadzirira wega zvakanyanya paunenge uchitarisira kuti iwe uchadzosera foni yako. Kana iwe uchikwanisa kutsvaga iyo nzvimbo yefoni, unogona kudzosa foni yako.
Unodonhedza foni, uye hapana anoona. Rinogara ipapo. Iwe uchave nemikana yekudzosera foni nekutarisa kwainowanikwa.
Unowana sei foni yako mumamiriro ezvinhu (b) uye (c)? Pane zvingasarudzwa zviviri kwauri:
Iwe unogona kufaira kutsutsumwa kwemapurisa.
Iwe unogona kuedza kutsvaga nzvimbo yefoni.
Mumwe munhu anoba foni yako
Zvakanaka, mumwe munhu anoba foni yako zvinoreva kuti anozviita nechinangwa. Iye munhu ari kuba foni yako haana tarisiro yekudzosera foni yako. Zvakanakisa iwe zvaungaita pano kuisa faira yekunyunyuta yemapurisa uye uchitarisira kuti mapurisa achabatsira kutora foni yako kubva kune mbavha.
Kana ukasarudza sarudzo yekunyunyuta kwemapurisa, chii chaunofanirwa kuita?
Ehe, unogadzirisa! Tiri kuzotsanangudza mafambisirwo akaitwa kunyunyuta kwemapurisa. Zvinganzwika sezviri nyore, asi hazvisi. Pane seti yakatarwa yematanho iwe yaunofanirwa kutevera usati wapinda chiteshi chemapurisa. Ngatitarisei maitiro matanho nenhanho.
Kuwana iwo mariziro:
Nhanho yekutanga uye yekutanga ndeyekusunganidza zvese zvinodiwa. Iwe haudi kurira sebenzi kana iwe ukasvika kumapurisa. Paunoenda uye utaure nemapurisa, ivo vanobvunza izvi zvinotevera ruzivo:
Zita remugadziri wefoni.
IMEI Nhamba kana PUC Nhamba.
Nhamba yako yefoni (iyo 10-manhamba efoni nhamba).
Kana zvisiri izvo chaizvo, iwe unofanirwa kupa kufungidzira kwakanaka kwenzvimbo uko iwe warasikirwa nefoni.
Kana iwe uchifungidzira nezvemumwe munhu akaba foni yako, unofanirwa kupa ruzivo rweiye munhu. Kana iwe uchifunga kuti munhu akasarudzika akaba foni yako uye iwe ungangodaro ukaona munhu iyeye padyo newe, iwe unofanirwa kurondedzera munhu mune zvakawanda zvakawoneka ruzivo
Iwe unogona kuyeuka mamwe emamwe mazita akaita sezita remugadziri wefoni, modhi wefoni, yako 10-manhamba enhamba yenhamba, nezvimwewo mune zvese mukana, iwe hauchayeuke udzame hwakafanana ne IMEI Nhamba kana PUC Nhamba.
Kana iwe uine zvinyorwa zvakaita sewarandi kadhi, invoice, zvinhu zvekuisa, nezvimwe, tarisa zvakanaka kwavari. Aya magwaro anozove neruzivo rwakawanda rwaunoda.
Paunenge uchinge uine ruzivo rwese, chengetedza data rako. Iyo inotevera nhanho.
Nzira yekuchengetedza sei foni yako foni?
Kunyanya foni iwe yawakarasikirwa ndeye smartphone. Smartphones inouya nekukwanisa kuyananisa data nemasevhisi epamhepo seGoogle Calendar, Google Contacts, Gmail, Google Drive, nezvimwe zvinogona kuve nehuwandu hwemabasa akadaro epamhepo zvichienderana nefoni yako.
Shanyira iyo maaccounts kubva pakombuta yako (desktop kana desktop) uye nekukurumidza shandura mapasswords Kana iwe uine mifananidzo yakavanzika yakachengetwa mumakomputa eGoogle akadai seGoogle Dhivha kana yeGoogle Mapikicha, bvisa pasina kufunga kwepiri.
Shandura mapassword emaakaundi ako ehukama nekukurumidza kudzivirira chero kushandiswa zvisirizvo.
Kana paine mapassword uye akakosha ezvemari dhata chitoro mune akadai ekuchengetedza makore maakaunzi, tora kopi uye bvisa iyo data zvakare. Kana iyo data isina kuchengetwa mumavhidhiyo ekuchengetedza pamhepo uye inowanikwa nyore nyore kubva kumaficha maneja, tora matanho anotevera nekukurumidza.
Fonera bank yako kana yemari sangano uye rondedzera kurasikirwa. Kumbira mumiriri kuti atore foni yako kuti asunungure account yako / maawa uye azadze kadhi rako.
Vazivise kuti chero chinenge chatora nzvimbo kubva panguva yawakarasikirwa nefoni yako kudzamara nguva yauri kuvafonera, hausi iwe wakatanga kutengeserana. Kumbira mumiriri kuti adzorere kutengeserana kwakadaro kana zvichibvira.
Kana iwe uine sarudzo yekupukuta kure kwefoni foni yatova kushanda, shandisa iyo kudzima data rese pafoni yako uye udzose kudzosera kwemafekitori.
Dzora SIM yako kadhi:
Unogona kusarudza kuendesa SIM khadi yako mushure mekunge waudza mapurisa nezvekurasikirwa kana kuba. Unogona kudaro usati waudza mapurisa. Pane nguva dzose mukana wekumirira kusvika mapurisa atora iyo nyunyuto. Haungazive. Iye munhu anowana foni yako (kana ukaikanganisa netsaona pane imwe nzvimbo) anogona kunge ari munhu kwaye, uye anogona kuedza kubata mumwe munhu kubva kunharembozha yako kuti azivise kuti ane foni. Kana SIM isiri kushanda, munhu haakwanise kudaro.
Nekudaro, haugone kufuratira imwe sarudzo zvakare. Iye anowana yefoni yako anogona kunge asiri munhu kwaye. Pamwe, mumwe munhu akaba foni yako! Kana iwe opine kuti iwe wakamirira kwenguva yakareba zvakakwana, iwe unogona kuenda kumberi nekudzora iyo SIM kadhi.
Kuti urege kuita nhamba yako, unofanirwa kufonera muridzi wetiweki, uye kumbira mumiriri kuti ashandise SIM. Mumiriri achabvunza akawanda akati wandei seAadhar Nhamba yako (kana chero imwe nhamba inozivisa), yako zita, yako Kero, zvichingodaro. Kana mumiriri achinge aziva kuti ndiwe muridzi wenharembozha, mumiririri anozoita basa reSIM.
Mumiriri usati wadaro, unogona kukumbira mumiriri kuti akuzivise iyo yekupedzisira foni yakaitwa pafoni. Kana iwe usina kufona kokupedzisira, ruzivo rwamunogamuchira kubva kumumiriri runogona kubatsira mapurisa.
Nzira yekuudza kurasikirwa kune mapurisa
Heano maitiro maviri, viz:
Iwe uchashuma kuba.
Iwe unoshuma foni yakarasika kana yakasarudzika.
Maitiro eaya maviri akasiyana. Ngatitarisei maitiro maviri aya zvakasiyana.
Nzira kana kubika kuba uye kusefa MOTO
Kana iwe uchifunga kuti mumwe munhu akaba foni yako, zvakakosha kuti iwe uende kumberi uise MOTO. Icho chikonzero chiri nyore. Iye munhu akaba foni yako anogona kuishandisa zvisizvo nekuda kwematsotsi. Ukasaisa MOTO, uchave nemhosva yezviitiko zvematsotsi zvakadaro zvinosanganisira foni yako nefoni foni. Iwe unoda here dambudziko rakadai?
Pane seti yakatarwa yematanho iwe yaunofanirwa kutevedzera pakuisa MOTO. Matanho ndeiyi:
Enda kukamba yemapurisa iri padyo nenzvimbo yaive nefoni iwe usati warasikirwa nayo. Semuenzaniso, kana iwe uchigara muJadavpur muKakkata, asi iwe wakarasikirwa nefoni pawakanga uri kuKalighat, Kolkata, unofanirwa kushanyira Kalighat yemapurisa kunoshuma kuba uye faira iyo MOT.
Udza mumwe munhu ari mu station yemapurisa kuti iwe unoda kuisa FOT, uye bvunza kumunhu akakodzera.
Paunenge iwe wawana munhu uyo ​​anofa MOTI, muudze kana iye kuti pane munhu akaba nhare yako, uye kuti iwe unoda kuisa faira MOTI yekuba mbozha pasi peCPC Chikamu 154. Ehe, taura chikamu.
Isa ruoko pamusoro pefoni yefoni yako (modhi, IMEI Nhamba, ruvara, zita remugadziri, nezvimwewo)
Kana uchikwanisa, ipa ruzivo rweiye munhu waunofunga kuba foni yako.
Kana pakanga paine zvapupu, edza kupa izvo zvapupu izvozvo kana zvichibvira (kazhinji haugone kupa izvo ruzivo).
Kana mapurisa achinge aisa MOTO, tora kopi yakafanana. Usakanganwa kutora kopi. Iyo kopi ichakubatsira iwe kuongorora iyo MOTO mamiriro.
Zvinhu zvakakosha zvaunofanirwa kuziva:
Musi waFebruary 5, 2014, ese matunhu muIndia neese maTunhu Territories akagamuchira kuraira kubva kuCentre zvichienderana nekuti, kunyoresa MOTO yekuba kwefoni inofanirwa. CrPC Chikamu 154 inotaura zvakajeka iyo mandiro.
Kana mapurisa akaramba kunyoresa MOTI, unogona kunyora uye kutumira tsamba kuna Superintendent wemapurisa (CrPC Chikamu 154 (3)) kana iye Magi (CrPC Chikamu 156 (3)). Mapurisa aramba kunyoresa MOTO yekuba mbozhanhare imhosva.
Unoteedzera sei kufambira mberi kunoitwa nemapurisa nenyaya yako yekunyunyuta?
MHA kana Ministry of Home Affairs yakapa kuraira panaJulai 23, 2014. Musoro wezano ndewokuti, "Kunyoreswa Kunyoresa MOTO yeS Stolen Mobile." Sezvineiwo nezano, mupurisa ari kutarisira kuferefetwa (tinomuti saiye wekuferefeta) anofanirwa kutevera mamwe matanho. Kana iwe uine kopi yeMOTI, unogona kuchengeta ziso pamatanho anotorwa nemukuru wekutsvaga. Matanho anofanirwa kutevedzerwa nemukuru maererano nekuraira ndeye:
Mukuru anofanira kutora matanho ari madanho ekutsvaga nhare dzakabiwa uye kudzidzosera.
Iye mushandi anofanirwa kubata vese vanopa network kuti vaone iwo manhamba enhamba yefoni iri kushanda panharembozha (inowanzozivikanwa sechipfambi) mushure mekuba.
Kana mukuru achinge awana iwo maficha erufu runoshanda, mukuru anofanirwa kushanyira kero yemunyoreri yaanogamuchira kubva kuneweta mupi.
Technical information (IMEI Nhamba) yefoni yakabiwa inowanikwa nemupurisa, uye ne network network. Iye mukuru anofanira (pamwe netiweki kana sevhisi) anotora matanho ese akakosha (zvisinei nekuomarara kwematanho) kuongorora iyo IMEI Nhamba uye kutsvaga iyo yakabiwa ruoko.
Mupurisa anofanira kupa hunyanzvi hwenharembozha yakabiwa kuZIPNET (Zonal Yakabatanidzwa Mapurisa Network). Mapurisa anofanirwa kunyoresa ruzivo rwehunyanzvi paZIPNET kudzivirira kutengeswa kweruoko rwakabiwa (kazhinji, mapurisa anofanira kunyoresa IMEI yezvose ruoko zvakabiwa kuitira kudzivirira kutengeswa kwenharembozha.
Iwe unogona kutarisa matanho ese ari pamusoro kana iwe uine kopi yeMOTO. Iwe unofanirwa kupa iyo MOTI nhamba kana iwe uchibvunza kune ruzivo. Pasina iyo nhamba yeFU, iwe haugone kuwana chero ruzivo. Imhaka yeizvi; unofanira kutora kopi yeFOT kana mapurisa anyoresa MOTO.
Nzira yekubika yakarasika kana kusarongeka foni
Kana iwe uchifunga kuti wakakanganisa foni yako kana kuirasa (kureva kuti, unotenda kuti hapana munhu akaba foni yako, asi iwe ndokuirasikirwa nekuda kwekushaiwa hanya kwako), haunyore MOTO (Yekutanga Ruzivo Rwekuita) nezvebiwa. Zvaunoita iwe unoshuma kurasikirwa uye faira DDR (Daily Diary Report). MOTO inoitirwa mhosva dzakakomba nepo DDR ndeyekusavimbika. Paunochera DDR, zvinoita souchapupu hwekuti vavariro dzako dzakanaka kunyange kana mamwe akashandisa zvisina kufanira foni yawakarasa.
Nekudaro, kana iwe uchifunga kuti iwe wakarasikirwa kana kukanganisa foni yako kana ruoko, unonyoresa DDR kwete MOTO. Zvekunyoresa DDR, iwe unofanirwa kunyora tsamba kuOIC (Officer in Charge) yemapurisa ari padyo neweawakarasikirwa kana kuisa foni yako mbozha.
Iko hakuna chimiro chakananga chekunyora tsamba. Nekudaro, zvakakosha kuti iwe upe ruzivo rwakawanda sezvingabvira kuti zviite nyore kumapurisa. Kana iwe usiri kuziva zvekunyora mutsamba, heino samuenzaniso diki yekubatsira kwako:
Nhamba yako yekutaurirana (kana iwe usina imwe imwe nhamba, ipa huwandu hwenhengo yemhuri yako kana yeshamwari)
Yako email ID
Zuva: Ipa zuva rauri kunyora tsamba
Zita uye Kero yemapurisa epanzvimbo
Chinyorwa: Kurasikirwa kwefoni yangu (ipa zita remugadziri uye mhando yemawoko uye 10-manhamba efoni nhamba)
Anoremekedzwa Sir / Madam,
Ini ndanga ndichifamba kubva ku ________ ndichienda ku ________ pazuva (ipai zuva rezviitiko) nemotokari / tekisi / bhazi / rickshaw / tsoka (kana kufamba). Ndakarasikirwa nefoni yangu nefoni mbozha (taura iyo inoshanda ye10-digit nharembozha) pamwe ne (taura chero chinhu chipi zvacho chawakarasa) kumwe kunharaunda pakati pewakabva rwendo nerwendo (kana iwe ukafunga wakarasa foni yako pane imwe nzvimbo, taura nzvimbo iyoyo).
Ini handidi kuti foni yangu (zvese nharembozha nenhamba mbozhanhare) dziwire mumaoko asiri iwo. Kuti udzivise kushandiswa zvisirizvo, ndiri kukumbira kuti undibatsire nekunyoresa DDR uye utore matanho akakodzera ekutsvaga foni.
Kubatsira kuongorora kwako, ndiri kusunga ruzivo nezve foni yangu:
Yakatengwa kubva (taura mutengesi)
IMEI Nhamba yefoni
Hufakazi hwekutenga (kana zvichikwanisika, ipa bhajista / invoice)
Ikopi ye ID ID (ipa ID sePassport, Aadhar, Voter Card, nezvimwewo)
Ndinovimba kuti iwe uchatora matanho anodiwa pakutanga.
Signature (ipa yako siginicha)
Zita (ipa zita rako rizere)
Unogona kuenda online
Kunyangwe iwe uri kuodha MOTA kana DDR, nzira dzaunoverenga pamusoro dzese dziri nzira dzisiri dzekunze. Zvakare, iwe unofanirwa kuenda kukamba yemapurisa kuti basa rako riitwe. Neraki, mamwe mapurisa madhipatimendi mune mamwe matunhu ikozvino ane nzvimbo yekunyora zvichemo online.
Ehe, iwe unogona kutaurisa kuba kwefoni kana kurasikirwa zvakananga kubva pawebhusaiti remapurisa department rako (chero sarudzo iripo). Iwe unofanirwa kupa ruzivo rumwe chete sezvauchazopa kazhinji munzira isina basa. Iwe unozofanira kupa rumwe ruzivo.
Zvichemo zvepamhepo zvinoshanda uye zvinokurumidza. Kuenda nedhijitari kunobatsirawo kuvaka kuvimba pakati pemapurisa uye neruzhinji. Ichokwadi chinozivikanwa chekuti vanhu vanotarisa mapurisa seuori. Vanhu vane fungidziro yekuti mapurisa achashungurudza avo varwadziswa panzvimbo pekutevera vanopara mhosva.
Pamhepo portal inorambidza chero mukana wekutungamira kutanga kutaurirana. Kamwe chete kunyunyuta kwepamhepo kuchinge kwagamuchirwa, mumwe munhu kubva kubazi rezvemapurisa anozobata kana pazvinenge zvakakodzera.
Mapurisa emapurisa mumaguta akasiyana siyana enzvimbo dzakasiyana siyana muIndia ane nharembozha dzawo online vanhu vanokwanisa kunyoresa pamhepo zvichemo. Kana iwe uri kufunga kuti ndedzipi dziri muIndia ine iyo online nzvimbo, heano mamwe matunhu apo mapurisa emapazi mune mamwe maguta ane nzvimbo yekunyunyuta online:
Kana iwe uchigara muDelhi, iwe unogona faira kunyunyuta zvakananga kubva kune yepamutemo webhusaiti yeDelhi Police.
Ndokumbira utarise kuti dhipatimendi rega remapurisa richava newakasiyana webhusaiti. Iyo yekutsvaira inogona kunyengera zvishoma asi zvisingaite. Iva nemoyo murefu. Mamwe masango anokukumbira kuti unyore usati waisa kunyunyuta online. Izvo ruzivo iwe rwaunoda kupa panguva yekunyoresa zvinogona kukutyisa zvishoma. Rangarira kuti uri kubata nemapurisa uye ivo vanozobvunza kune rumwe ruzivo. Sezvo usiri kukanganisa, hapana chikonzero nei iwe uchifanira kutya kutya kupa izvo. Enda musoro uye unopa zvinyorwa. Basa rako rinozopedzisira rave nyore.
Kudzorera foni yako kubva kumapurisa
Kana dhipatimendi remapurisa rikakwanisa kutevedzera foni yako uye kuridzora, mapurisa achakubata uye azivise zvimwe chete. Nekudaro, haugone kungo famba uchipinda ndokudaira foni yako. Pane yakatarwa nzira iyo iwe yaunofanirwa kutevera. Maitiro acho anosanganisira anotevera:
Kana mapurisa akangodzosera foni yako, vanoizoiendesa kudare.
Dare rinova mutariri wefoni yako. Foni yako ichawana zita idzva! Rega kunetseka! Rinongova zita rinoshandiswa nemutemo kududzira zvinhu zvakabiwa, zvakabiwa kana zvakaraswa izvo zvinodzoserwa nemapurisa uye zviri muhusungwa mudare. Iri zita 'MUDDEMAL.'
Rangarira kuti mapurisa anonunura foni yako anoendesa zvinhu kuMatare Magweta vari pasi pekutongwa kwemapurisa.
Iwe unofanirwa kunyora fomu rekushandisa 'Kudzoka Kwezvivakwa.' Iko kunyorera kunowira pasi peCrPC Chikamu 451.
Iwe unofanirwa kunyorera kudare pamwe chete nemagwaro anodiwa anosanganisira gwaro rekutenga, gwaro rako rekuzivisa, nezvimwe.
Dare rino zivisa ruzivo rwese panguva yedare redzimhosva, uye kana maMagisheni aguta, Magistrisi anozopa odhi rekuti adzore foni yako. Dare rinotungamira rairo rakananga kukamba yemapurisa.
Iwe utore iyo Magistrates order woigadza pamberi pemapurisa emapurisa anoshandira department iri.
Mapurisa anoenda kuburikidza neodha uye obva adzorera foni kwauri mushure mekutora kubva kudzora kwedare.
Ehe, maitiro acho akareba uye anoneta. Nekudaro, ndozvazvinoita. Iwe unofanirwa kuenda kuburikidza neicho chose chiitiko kuyerera sezvo mutemo wenyika unorayira icho. Mapurisa uye vanoita zvemitemo havazotore chero njodzi nekuti havazomboda kuendesa foni yakarasika kune chero munhu weXYZ asiri iye muridzi ane kodzero.
Kunzwisisa IMEI Nhamba
Isu tanga tichitaura zvakawanda nezve IMEI Nhamba. Chii ichochi? Mubvunzo wakanaka! Iyi ndiyo mhinduro:
IMEI inomirira International Mobile Equipment Identity.
Yese yega nhare mbozha padhuze nepasi rino inotakura IMEI Nhamba. Nhamba yacho ine 15 manhamba, uye mudziyo wese une nhamba yakasarudzika. Hapana maviri IMEI Nhamba anogona kumboenderana. Mukukosha, IMEI Nhamba ndeye yakasarudzika nhamba yekuzivikanwa yefoni yega yega nhare - nhare mbozha kana piritsi kana phablet.
Isu tinodhirodha fananidzo yekunzwisisa kwako kuri nani. Iwe semugari wemuIndia une yakasarudzika nhamba yekuzivikanwa inonzi Aadhar Nhamba. Nhamba yacho inotakura ruzivo rwese nezvewe kusanganisira zita rako, zera, murume kana mukadzi, kero, biometric kuoneka (retina scan uye chigunwe chepini), nezvimwe
Iwe unogona kufunga nezve IMEI Nhamba seAadhar Nhamba yeyenharembozha yako. Iyo IMEI Nhamba ichave neruzivo rwese rwefoni yako. Kunyangwe chinhu chete chaungaona IMEI Nhamba yefoni yako, iyo inogadzira inochengetedza zvese zvemafoni inopesana neayo IMEI Nhamba.
Nenzira chete, iwe unogona kuchinja kero yako, kana zera rako rinoramba richingowedzera, asi yako Aadhar Nhamba haina kumbochinja, iyo IMEI Nhamba inoshanda yakafanana nenzira imwe chete. Unogona kushandura zvirongwa pafoni yako, unogona kuchinja SIM, kana kuti unogona kuchinja SD kadhi asi, IMEI Nhamba haizomboshanduke.
Nekuti IMEI Nhamba inogara yakafanana, ndeimwe yemhando yakapusa yehunyanzvi iyo inoshandiswa nevashandi vemitemo yekutsvaga iyo yakarasika kana kubiwa foni.
Nzira yekuwana sei IMEI Nhamba yefoni nhare?
Zvekutsvaga iyo IMEI Nhamba yeyenharembozha yako, pane zvimwe zvingawanikwa. Ngatitsvage zvimwe pamusoro penzira imwe neimwe.
Tarisa uise pafoni
Iyo imwe yedzakareruka nzira dzekutsvaga yako kifaa IMEI Nhamba. Bhokisi iro rine foni rinenge riine IMEI Nhamba yakadhindwa kana yakanamatira (semuti) pabhokisi. Vamwe vanogadzira vanopa mbiri IMEI nhamba yechinhu chimwe chete. Semuenzaniso, 'Mi' - imwe yemazita efoni akakurumbira muIndia inopa maviri eMEI Nhamba yeimwe nharembozha. Vagadziri vanodhinda manhamba ese ari kumashure kwebhokisi ayo akabata foni mukati.
Type * # 06 #
Pane ese maitiro, typing * # 06 # ndiyo nzira yakasarudzika. Iyo ndiyo yechokwadi-yekupfura nzira yekutsvaga yako zvishandiso IMEI Nhamba. Izvi ndizvo zvaunofanira kuita:
Vhura foni yako uye ubudise dier programu.
Type * # 06 # (hapana nzvimbo pakati)
Ndizvo zvose! Haufanire kunyange kubaya bhatani rekufona. Iyo nguva yaunonyora * # 06 #, uchaona pop-kumusoro pane yako skrini. Iyo IMEI Nhamba inoratidza mune pop-up. Kana paine maviri IMEI manhamba, ese ari maviri acharatidza pane pop-up. Iyi * # 06 # nzira inoshanda kune ese ari maviri maApplication eApp.
Tarisa mafoni marongero pamidziyo yeAroid
Kana iwe ukasada imwe yemaitiro maviri ari pamusoro apa, unogona kutora zvishoma nzira yakareba. Iwe unogona kuwana IMEI Nhamba (s) yefoni yako nhare kuburikidza nechikamu chekuisa.
Hezvino izvo zvaunoda kuita:
Enda kuZvirongwa app uye tora kuti uvhure.
Dhirodha pasi kuenda ku 'About Foni' chikamu. Iyo inogara iri yekupedzisira sarudzo pane iyo skrini. Tinya pazviri.
Pane iyo skrini itsva, tsvaga iyo 'Status' sarudzo. Iyo inowanzo kuve yechitatu sarudzo kubva kumusoro. Tinya pazviri.
Screen new ichavhurwa. Tsvaga iyo sarudzo inoverenga 'IMEI ruzivo.' Kazhinji, iri sarudzo yechina kubva kumusoro. Tinya pazviri.
Pane rinotevera chidzitiro, iwe uchaona rondedzero yeese IMEI Nhamba yefoni kana chishandiso chako.
Tarisa kuiswa kwefoni pane iOS zvishandiso
Yakanaka chaizvo zvakafanana neyekushandisa zveMadhebhu. Enda kune zvigadziriso zvefoni uye utarise sarudzo inoverengwa 'Zvakawanda.' Tinya pane 'Zvakawanda' kuti utange pane imwe skrini itsva kwaunoda kutsvaga imwe sarudzo inonzi 'About.' Tinya pane 'About' sarudzo, uye iwe uchaona 'IMEI' yakanyorwa. Tinya pairi kuti utore iyo IMEI Nhamba.
Dzimwe nzvimbo dzekutsvaga IMEI Nhamba (s)
Kunze kwemaitiro matatu ataurwa pamusoro, iwe unogona zvakare kutora iyo IMEI nhamba kunzvimbo dzakasiyana dzefoni yako zvichienderana nerudzi rwefoni yaunoshandisa. Heino rondedzero izere:
Tarisa kumashure kwefoni yako. Vamwe vanogadzira vanodhinda IMEI Nhamba kumashure. Vamwe vanogona kuisa pasitadhi kumusana vachidudza iyo IMEI Nhamba.
Kana foni yako iine bhatiri rinobvisa, bvisa uye uone riri pasi. Vagadziri vanogona zvakare kudhinda iyo IMEI munzvimbo inogara bhatiri.
Vamwe vanogadzira vanonyora IMEI nhamba paSIM tray (s).
Nei IMEI yakakosha?
IMEI nhamba yakasarudzika yekuzivikanwa iyo vagadziri vanogovera kune nharembozha. Munoziva izvi. Asi, iwe waiziva here kuti IMEI Nhamba yakasiyana neSIM Nhamba yako? Paunenge uchitenga SIM, uye nekuiisa mufoni yako, webhusaiti network inotora zvese zviri zviviri SIM nhamba uye IMEI Nhamba. Pasina iyo IMEI Nhamba, yako cellular sevhisi haisi kuzoita basa. Iyo network network inoda iyo IMEI Nhamba yekuziva mudziyo. Nharembozha dzecustomer mamwe masevhisi kune mamwe maturusi. Pasina chishandiso ruzivo, iwo masevhisi anotadza kutanga.
Iyo inogadzira inogona kuchinja IMEI Nhamba yechishandiso?
IMEI Nhamba ndiko kunozivisa nhamba yeiyo kifaa chako. Vagadziri vacho havana chikonzero chekuchinja IMEI Nhamba. Muchokwadi, mune mamwe masimba, kuchinja IMEI Nhamba hazvisi pamutemo zvachose.
Ndosaka zvisingashamisi, iyo mitumbi inosimbisa mutemo inochengetedza rekodhi yeIMEI Nhamba dzemidziyo yakarasika, yakabiwa kana kuwanikwa. Kana mumwe munhu akaenda kunobvunza kuti yakarasika kana kubiwa mudziyo yakatorwa nemapurisa, kupa IMEI nhamba inofanirwa.
Kuti usakanganwe kuti IMEI Nhamba dzeese yakarasika uye yakabiwa zvishandiso zvakanyorwa mazita kuti hapana munhu anogona kutengesa kana kutenga izvo michina. Zvine kusuwa, dzimwe mbavha dzinoedza kupfuura izvi nekuedza kutsiva IMEI Chiverengero chezvinhu zvakabiwa nezvisiri zvisina mazita mazita eEMEI kuitira kuti vatengese zvinhu zvakabiwa.
Saka, zvinodikanwa kuti usambofa wakagovana IMEI Nhamba dzefoni yako nemumwe munhu. Iwe unofanirwa kuchengetedza IMEI Nhamba dzakachengeteka.
Kana ukasarudza kuyedza kutsvaga nzvimbo yefoni yako, chii chaunoda kuita?
Kana iwe uri kufunga nezve sarudzo yekutarisa nzvimbo yefoni yako kuti iripi nzvimbo dzefoni yako, uri kungoita benzi pachako. Nei tiri kutaura izvi? Nechikonzero chiri nyore! Kana mumwe munhu akaba foni yako kana mumwe munhu akawana foni yako yakarasika uye akafunga kurega kuidzosera, kutsvaga nzvimbo yefoni yako hakubatsiri. Kubvunza mutemo wekusimbisa kuti ubatsire inogara iri bheji riri nani. Zvakadaro, kana iwe uchifunga kuti iwe wakangokanganisa foni yako uye kuti mikana yako yekudzorera foni yakakwira, iwe unogona kugara uchishandisa nzira iyi.
Kutaura chokwadi, iyi haisi imwe nzira. Nzira dzakawanda dzinogona kuuya pasi peizvi. Isu tinofungidzira mashoma pano:
Iwe uri kushandisa smartphone.
Chishandiso chako chinomhanyisa kushanda kana kushanda pane iyo Android anoshanda sisitimu kubva kuGoogle.
Chishandiso chako chine nzvimbo inoitirwa neGoogle nzvimbo.
Chishandiso chako hachisi mu'mhepo ndege. '
Chishandiso chako 'hachidzimi.'
Chishandiso chako chine internet chinoshanda - 2G, 3G kana 4G.
Kufunga kuti foni yako inogutsa aya mamiriro, heano maitiro aunogona kushandisa kutsvaga nzvimbo yefoni yako:
Mudziyo weAditor Chidimbu (Parizvino chinozivikanwa seKuwana Chipenga changu)
Android Chidimbu Maneja (ADM) ibasa raGoogle iro rinowanikwa neyakagadzika mune yega yega smartphone inomhanya iyo Android yekushandisa system.
Ichi chimiro chinotenderwa nekukasira. Nekudaro, kana iwe ukadzima basa iri, usati warasikirwa nefoni, chimiro hachigone kushandiswa.
ADM ndeyokungoteedzera nzira yekutevera iyo Google inopa kune vese vashandisi veApple. Nekudaro, iwe unofanirwa kupa mvumo kune ADM kuti ushande mukugona kwayo kuzere. Mvumo mbiri iyo yaunofanirwa kupa ndeiyi:
Kure kure kukiya chishandiso.
Remote kure rese data pane mudziyo.
Kana iwe usina kupa aya mvumo usati warasikirwa nefoni, chimiro hachizoshande nemazvo.
Sezvatakataura, ADM chinhu chakazvimirira, uye haufanire kuisa chero basa parutivi.
Kuti ushandise sevhisi iyi, unofanirwa kuita chero chipi zvacho chinotevera:
Pinda muGoogle account yako uchishandisa komputa: Ukangorasikirwa nefoni yako, tsvaga komputa ine neinternet. Iwe unofanirwa kupinda muGoogle Akaunti yako. Ita shuwa kuti iyo Akaunti yeGoogle yauri kusaina mairi ndiyo imwe chete inoshanda pane chako. Paunongopinda, tevera matanho ari pasi apa:
Vhura iyo new browser yewindows kana tab.
Nyora mu 'Tsvaga Mudziyo Wangu.'
Iri peji idzva rinovhura rinoratidza chiziviso chinokuudza kuti ubate mutemo kuita kana iwe uchifunga kuti pane munhu akaba chinhu chako. Ichataurawo kuti nzvimbo yechigadzirwa icho Google icharatidza inogona kunge isiri chaiyo. Dzvanya pane 'Bvuma' bhatani.
Iwe uchaona mepu nenzvimbo yechigadzirwa chinoratidza nenzvimbo yepini. Iwe unogona kuswededza mumepu kuti uone chaiyo nzvimbo. Kana iyo nzvimbo iri pane imwe nzvimbo iri pedyo, unogona kusarudza kuridza ruzha pane mudziyo we5 maminetsi. Iwe unogona kuwana iyo sarudzo iri kuruboshwe rwe skrini. Dzvanya pairi, uye chishandiso chinotanga kurira kunyange kana mudziyo wacho uri muchinyararire.
Kana iwe usingakwanisi kuwana chishandiso kunyange mushure mekurira, chinhu chinotevera chaungaita kuchengetedza mudziyo. Iyi sarudzo iri zvakare kurudyi kwesvikiro. Kubaya pane iyi sarudzo kunovhara mudziyo wako uye kukubvisa muakaundi yeGoogle. Icho chimiro chekuchengetedza foni chinonakidza. Ichakutendera kuratidza meseji pachiratidziro chako chakarasika. Iwe unogona kusarudza kuisa nhamba yefoni iyo chero munhu anowana foni anogona kusvika kwauri. Iwe unogona zvakare kusarudza kunyora mune meseji kune chero munhu anowana chishandiso. Iwe unogona kunyora ese maviri foni nhamba uye meseji! Paunenge iwe uchipa ruzivo, tinya pane 'Yakachengeteka Dhiza' bhatani. Runhare runokiya, uye meseji inoratidza pachiratidziro chako chakarasika.
Kana nzira dzese dziri pamusoro dzichikundikana kupa mhedzisiro, uye iwe uchida kuve nechokwadi chekuti hapana che data pane foni yako inowira mumawoko asiri iwo, pane chetatu sarudzo. Sarudzo ndeye - 'Futa Chidimbu.' Ehe, iwe unogona kudzima chose zvese pafoni yako. Mifananidzo, kutaurirana, ruzivo rwemari, kudana matanda, kuongorora nhoroondo, yako yakaiswa mapoinzi - zvese! Iwe, zvisinei, iwe unofanirwa kunzwisisa kuti kana iwe ukasarudza kupukuta iyo yedhi data, haugone kuwana kifaa uchishandisa 'Google Tsvaga Mudziyo Wangu' sarudzo.
Pinda muGoogle account yako uchishandisa smartphone: Iyo 'Tsvaga Mudziyo wangu' sevhisi yeGoogle inowanikwawo nenzira yefoni app iyo yaunogona kuisa pane smartphone. Kana iwe uine mukana kune imwe smartphone (yako kana yeumwe munhu), isa iyo app kubva kuGoogle Play Store. Paunenge uchinge uchinge waisa pane mumwe munhu's smartphone, pinda iwe semuenzi. Ipa iyo Google account nhoroondo yeakaundi yaunoshandisa pafoni iwe yausingakwanise kuwana. Ukangopa ruzivo, iyo app inokutendera kuti uite mabasa ese (ataurwa pamusoro apa) aunokwanisa kuita uchishandisa komputa.
Heano maitiro ekuti Google Tsvaga Mudziyo wangu unowoneka pakombuta:
Yakarasika Android (ichi chinhu app pane Play Store)
Yakarasika Android chishandiso chinoshanda zvakaringana nenzira yakafanana neyaGoogle's 'Tsvaga Mudziyo wangu' inoshanda. Nekudaro, iyi yechitatu-bato programu ine-mu-kutenga kutenga. Iyo app haizobvunze iwe kuti utenge chero chinofungidzirwa. Chinhu choga chaunogona kutenga seti yezvinyorwa zve premium iyo inobvumidza yakawedzerwa functionalities.
Zvino, Google haifarire iyoapp zvakanyanya, uye isati yatanga yekupedzisira yeapuro, Google yakatanga kumaka iyo App seinokuvadza. Kunyangwe kuedza kweGoogle kudzivirira vanhu kuti vasashandise iyo app, iyo app yakavhara 5 miriyoni kurodha pasi rese.
Zvino mubvunzo ndewekuti kana warasa foni yako usati waisa iyo app, unoishandisa sei? Pane nzira yekubuda iyi dambudziko. Maitiro acho akanyanya kuoma, asi kana uchigona kupedzisa matanho ese, programu yacho inoshanda zvakakwana. Tisati takuudza nhanho iwe dzaunofanirwa kutevera, yeuka kuti Yakarasika Android inoshanda chete kana foni yako ichizadzisa zvinotevera maitiro:
Foni yako 'yakavhurwa.'
Foni yako ine chinoshanda chinoshanda kuGoogle Account yako.
Foni yako yakabatana neinternet uchishandisa 2G kana 3G kana 4G.
Kana foni yako ichigutsa mamiriro ari pamusoro, tevera matanho aya:
Nhanho 1: Kuisirwa kure
Ehe, hongu! Unoverenga chaizvo! Iwe unogona kuitisa kure kuisirwa. Vhura webhusaiti yewebhu (vamwe vanozivikanwa ndiGoogle Chrome, Firefox, Opera, nezvimwewo) pane yako komputa uye nyora mu 'Google Play Store.' Shanduro yebrowser ichavhura. Mubhokisi rekutsvaga, nyora Yakarasika Android. Yekutanga app inoratidza kumusoro ndiyo yaunoda kuisa. Dzvanya pairi. Pane peji rinotevera, tinya pane 'kuisa' bhatani. Iri bhatani rakasvibira.
Ndizvo zvose! Iyo app ichaisa kure kune chako chishandiso.
Nhanho 2: Kunyoresa
Anenge app ese aunoveisa anoda kunyoreswa. Kunyangwe Yakarasika Android ichaida. Sezvo iwe wakaisa iyo app kure, iyo app haizonyorese otomatiki (kungoita kuti uzive iwe, iwe kana iwe ukaisa iyo app yacho zvakananga pafoni yako, iyo app inonyoreswa inonyoresa uchishandisa yako inoshanda yeGoogle account, uye kana paine akawanda maakaundi, iyo app achanyoresa ese maakaundi).
Nzira yekubuda nayo ndeyekutumira mameseji pafoni yako iwe yaunoda kutsvaga. Unogona kushandisa chero imwe foni kuti udaro. Semuenzaniso, unogona kushandisa foni yemunin'ina wako kana hanzvadzi. Shandisa yakasiyana foni uye nyora mu 'androidlost rejista' (isina makotesheni) muiyo meseji kutumira. Tumira meseji iyi kunhamba yako yefoni. Kamwe foni yako painogamuchira iyo meseji, Yakarasika Android ichangozvinyoresa.
Ko kana iwe warasikirwa piritsi? Hwendefa haingave neshoko rekutumira! Muchiitiko chakadai, usati waisa Lost Android kure, isa 'Jumpstart ye AndroidLost.' Sapakutanga, enda unoisa kure kure. Paunenge iwe uchizoisa 'Jumpstart yeAppLLost,' kuregedza kuisa 'Yakarasika Android.' Paunenge iwe uchinge waisa Yakarasikirwa Android kure, iyo yapfuura app, kureva, 'Jumpstart ye AndroidLost' inongozvimanikidza Lost Android kunyoresa yako Google Akaunti.
Nhanho 3: Shanyira webhusaiti
Iye zvino sezvo iyo app iri kushanda pafoni yako, iwe unofanirwa kuitisa kuti ishande. Sei? Runhare harunawe. Kuita kuti app iite basa, shanyira webhusaiti 'Yakarasika Android.' Ehe, pane webhusaiti yepamutemo. Pa webhusaiti iyoyo, iwe unofanirwa kupinda uchishandisa yako Google Akavimbika account. Paunongopinda iwe, iwe unowana kure kuwana kune ese maficha e 'Yakarasika Android.' Zvinhu zviri kure zvaunogona kushandisa ndeizvi:
Ita kuti foni yako ipenye uye ridza ruzha nyangwe foni yako yakanyarara.
Ona nzvimbo yenhare yako.
Unogona kukiya mudziyo wako kana kuvhura kure.
Bvisa data pafoni kusanganisira data pane yako SD kadhi (kana uine imwe mudziyo wako).
Gadzira pamberi pechishandiso kamera mufananidzo wemunhu akabata mudziyo.
Yakarasika Android ndeyechitatu-bato app. Unogona kana kusavimba nazvo. Chisarudzo chinogara chiri chako. Nekudaro, iyo app inoshanda zvikuru uye inogona kuva nzira iri nyore yekuwana foni yako ichipa yakavhurwa, uye mudziyo une inoshanda internet kubatana.
Google Mepu Nzvimbo Nhoroondo
Google Mepu Nzvimbo Nhoroondo haisi chaiyo yekutsvaga foni yakarasika. Nekudaro, unogona kugara uchitambisa nzira yaunoshandisa. Iko kushandiswa kwakawanda kwenhoroondo yenzvimbo ndeyokutarisa nzira dzekufambisa dzakapfuura, kuronga rwendo, nezvimwewo Asi, wakambopa here iyi pfungwa - 'chii chaizvo chinzvimbo chenzvimbo chinotaurira?'
Ehe, inotaura nezve nhoroondo yenzvimbo dzese nzvimbo uko foni yako yanga iri kwauri, kana nemumwe munhu. Iyo ficha inoshandisa mbozhanhare mbozhanhare ID uye kunyange WIFI nzvimbo yekuona nzvimbo. Dambudziko nderekuti chokwadi che data chinogona kusiyana kusvika pakakura. Kusiyana neGoogle Mepu Nzvimbo Nhoroondo, Google's 'Tsvaga Mudziyo Wangu' inoshandisa GPS kutsvaga foni. Kutevera GPS inopa kwakanyanya dhata kana ichienzaniswa ne cell tower IDs.
Kunyange zvakadaro, Google Mepu Nzvimbo Yenhoroondo inogona kugona kubatsira mukudzikisira pane panowanikwa foni yako yakarasika. Pane zvimwe zvinodiwa munzira iyi. Vari:
Foni yako kana mudziyo unoshingairira kushandisa yako Akaunti yeGoogle.
Iko kune internet kubatana pane yako foni.
Nhoroondo yenzvimbo, pamwe nekubika kwenzvimbo, zvese zviri kushandira paGoogle Mepu.
Foni haina 'kudzimwa.'
Heino runyorwa rwezvinhu zvaunofanirwa kuita kuti ushandise ichi chimiro kutsvaga yako foni nzvimbo:
Vhura Google Mepu kubva mukombuta yako. Ita shuwa kuti unosaina muakaunti yako yeGoogle.
Kamwe mepu painovhura, tinya pane hamburger menyu (matatu akaenzana mativi akaturikidzana) pane kuruboshwe kumusoro kwekona.
Kubva pane iyo menyu rondedzero, tinya pane 'Yako nguva yako.'
Tsamba itsva ichavhurwa. Pane peji idzva, sarudza zuva razvino. Icharatidza nzvimbo idzo foni yako yanga iri kwauri, kana nemumwe munhu.
Dambudziko neGoogle Mepu Nzvimbo Nhoroondo nderekuti harizokupe iwe chaicho nzvimbo. Izvo zvinongozokuudza nezve nzvimbo kana maviri kana anopfuura. Kuti uwane mibairo yakanaka, shandisa Google Mepu Nzvimbo Nhoroondo pamwe chete neGoogle's Tsvaga Mudziyo Wangu. Kana foni yako ichirira munzvimbo iri pedyo uye uchigona kuinzwa, unokwanisa kuwana foni yako.
Zvakanaka, kusvika zvino, tataura nezve kutsvaga yako yakarasika kana kubiwa foni. Hatina kutaura nezve kutsvaga nhamba yemumwe munhu.
Nhamba Yekufambiswa Kwefoni - Kutevera Nhamba Yechitatu-Yebato
Kana zvasvika pakuteedzera nhamba yako kana foni yako yakarasika, pane kurongeka kwezvinhu zvaunogona kuita. Asi, kana zvasvika pakutsvaga nhamba yemumwe munhu, zvinhu hazvisi nyore. Ngatitarisei nzira dziripo.
Nhamba yenhare yekutevera mawebhusaiti
Mamwe masevhisi epamhepo anokubvumidza iwe kuti uwane humwe ruzivo nezve nhamba yefoni. Iwe unogona kuzviita pano pane ino webhusaiti zvakare.
Iwe unofanirwa kunyora mune yakatarwa nhamba (kazhinji 10-manhamba efoni nhamba) isina 0 kana + 91. Paunongokiya huwandu, tinya pane 'Search' bhatani.
Webhusaiti inozodzosera mamwe madanho akadai se:
Type Signal: GSM kana CDMA
Denderedzwa mairi inhamba yenhare
Mepu ine nzvimbo yenzvimbo (inosarudzika) inoratidza guta iro nhamba iripo parizvino.
Mamwe mawebhusaiti anogona kuratidzawo zita remuridzi, asi kazhinji, haakwanise kuratidza kuti zita, kero, nezvimwe zvinowira pasi pevanzika remushandi. Iye anoshandira haangambofa akafumura ruzivo rwakadai. Kana vakaita, vanogona kuuya pasi pekupisa kwepamutemo kwavanogara vachida kudzivirira.
Ruzivo urwu haruwanzo kubatsira. Iwe unogona kuwana yakafara pfungwa asi kuwana zvakakwana uye ruzivo rwakakwana hazvigoneke.
Iwe unogona ikozvino kubvunza, 'nei mawebhusaiti aya achipa data risina kukwana kana ruzivo?'
Mubvunzo wakanaka. Mhinduro kumubvunzo uyu iri nyore.
Kana ruzivo rwako rwese ruchiratidzwa, mumwe munhu anehurombo anorwara anogona kushandisa iwo ruzivo nekukuvadza iwe mune zvemari kana imwe nzira.
Nhasi, iwe paunenge uchitenga nhare mbozha, unopa huwandu hweruzivo senge:
Nhamba yako yeAadhar (Aadhar yekubatanidza ikozvino inofanirwa).
Yako email ID.
Chero chero imwe nhamba yaunayo.
Ruzivo rwakakosha mumaoko evapari mhosva. Ivo vanokwanisa kuishandisa kuzviita makumi ezviuru zvezviitiko zvisingaiti izvo zvinogona kukuisa munzira inokuvadza (zviri pamutemo uye kunyange mumuviri) Imhaka yengozi iyi huru; nharembozha vanoshanda vanogara vanochengeta iyi data yakaderedzwa. Ivo vanozivisa data iyi kune vanoita zvemitemo chete kana varairwa nedare.
Nekudaro, kana iwe uchifanirwa kuwana zvese zvakanyatso tsanangudza, iwe unofanirwa kuwana kodhi yedare kuti uwane iyo data. Iwe unofanirwa kupa chirevo kune nharembozha runhare kuburikidza nemutemo chiteshi. Izvo chete ipapo iwe unogona kuwana data rakadaro.
Saka, aya mawebhusaiti anobatsira rinhi?
Aya epamhepo nharembozha ekutevera mawebhusaiti anouya anobatsira mumamiriro ezvinhu senge njodzi dzinongoitika dzoga. Unogona kushandisa masevhisi kuti uwane zano rekuti munhu angave kupi uye wozobuda nekutsvaga nekununura basa. Aya masevhisi epamhepo anogona kudzikisira nzvimbo yekutsvaga kwako, iyo inogona kuunza nekukurumidza mibairo.
Spy software ndeimwe nzira yekutevera kana kutevedzera nhamba yefoni. Asi izvi hazvisi pamutemo kunze kwekunge uine mvumo yekutaura kubva kumunhu ane nhamba yaunoda kuteedzera. Pane yakatarwa nzira yaunofanirwa kutevera kushandisa spy software.
Nzira yacho inosanganisira matanho anotevera:
Iwe unofanirwa kuve nekuwana kwemuviri kune foni iyo iwe yaunoda kutevedzera nekutevera.
Iwe unofanirwa kuisa software yekutsvaira pafoni. Iyo nhare inofanirwa kuenderana nesoftware. Kuti uise software yacho, uchafanirwa kurodha software yacho uye nekumanikidza kuisa mukati mefoni inotarisirwa.
Zvinogona kutora maminetsi mashoma kuisa uye kumisikidza software. Nekudaro, haugone kubvumidza muridzi wefoni kuti auwane iyo paunenge uchimisa software.
Iwe unofanirwa kugadzira online account nekambani inopa software.
Spyera software inoshanda sei?
Spy software yakagadzirirwa kushanda mune yakanyanyisa mode. Zvisingori nyore, ivo vanova vasingaoneki kana iwe uchinge wavaisa pafoni. Kamwe kuiswa uye kumisikidzwa kwapera, software yacho inotanga kutevedzera pakarepo.
Spy software inoita rakasiyana siyana mabasa. Vanouya netekinoroji yepamusoro uye vanogona kukubatsira kuti:
Rekodha runhare mbozha.
Rekodha SMS kana nhume masevhisi.
Rekodha zvese zvinobatika pafoni.
Spy pamabasa ezvekushambadzira mabasa.
Chengetwa rekodhi yemawebhusaiti ese anoshanyira mushandisi wefoni.
Log iyo chaiyo nzvimbo yenhare uchishandisa GPS service.
Gadzira makopi ezvifananidzo zvese nemavhidhiyo.
Seta chaiyo fenzi, uye kamwe foni painenge yangova iyo fenzi, iwe uchawana yambiro.
Muchidimbu, spy software inobvumira vanhu kuchengetedza iyo yakazara yezviitiko zvemunhu. Spy software yakanakira kune:
Vabereki vanoda kuchengetedzwa kwevana vavo uye havadi kuti vana vavo vapinde mumamiriro asingadiwe.
Vashandirwi vanoda kudzivirira vashandi kutengesa zvakavanzika zvevatengesi kukwikwidza.
Mauto ehondo nemauto ekudzivirira.
Pane munhu anogona kushandisa spy software?
Mamwe makambani anotengesa spy software. Ivo vachatengesa software kune chero munhu wezera repamutemo. Iri ibasa ravo kutengesa uye kuita purofiti. Kubva pamaonero emushandisi, iko kushandisa spy software kunogona kureva zvinorehwa nemutemo:
Kana iwe uri kuisa software pafoni yemumwe munhu pasina kuudza munhu wacho, pachave nemhedzisiro yemutemo. Nekuisa software yekutsiva, urikudarika muchivande kana usiri kuudza munhu iyeye.
Kana usiri wezera repamutemo kuti uite chiitiko chakadai, unopinda mudambudziko repamutemo.
Kana iwe usina mvumo chaiyo kubva kumutemo yekuita kudaro, iwe unoita chisimba.
Kana iwe ukatadza kuzivisa munhu pafoni yauri kuseta software yekuwongorora uye munhu wacho obva aziva, unogona kutarisana nemhosva yematare, mhosva yekupihwa mari.
Iwe unogona, zvakadaro, kushandisa software kana chinangwa chakanangwa chichibvumira iwe kuisa software yakadai kana uine mvumo yekumanikidza mutemo. Shandisa software yakadaro panjodzi yako.
Mamwe maspyware software anozivikanwa pamusika
Kana iwe uine mvumo yekuisa spy software pane yeumwe munhu runhare kana kana iwe uchida kuisa software yakadaro paOWN RISK yako, iyi runyorwa rwepamusoro-yakanyorwa mobile spy software ye2018:
App Name Rating zvayakanakira nezvayakaipira
XNSPY 9.8 / 10 - iOS uye Android zvinoenderana.
- Offline yekutsvaga rutsigiro.
- 30 + maficha.
- Remote kuisirwa inopihwa ne tech timu chete pane Android mudziyo wezvesarudzo yako. Kuisirwa kure kure hakuwanikwe kune iOS michina.
- Hapana rutsigiro rwe desktop.
- Iyo software inotsigira chete mafoni uye mahwendefa.
- Imwe rezinesi inobvumira kutsvaga chete chishandiso.
TrackMyFone 9 / 10 - Jail-kutyora iOS mudziyo haidi.
- Iyo software inobatsira kutevera vana.
- Monitors vashandi.
-Mamwe maficha achashanda chete pamidziyo yeApple ine midzi yekuwana.
- Zvishandiso zvinomhanya hapana jailbreak iOS vhezheni hauwane zvese zvemhando yepamusoro.
Spyzie 8 / 10 - Yakakwana yekutarisa vashandi nevana.
- Iyo software haina inoda iwe kuti jailbreak kana midzi mudziyo.
- Iyo yekushandisa interface iri nyore kwazvo.
-Zvinhu zvese hazvishande pamidziyo yese. Semuenzaniso, iPhone vashandisi havagone kushandisa nzvimbo yekutevera nzvimbo.
-Kana muridzi wemidziyo akakwenenzverwa akabvisa imwe data, data racho harigone kutorwa.
MobiStealth 7.8 / 10 - Iyo software inopa yakawanda kuwonekera kwezvinhu.
- Iyo software ine desktop kuongorora kwekutsigira.
-Imukati maficha akadai saWhatsApp, Facebook, SnapChat yekutarisa, uye Keylogger chimiro ikozvino chave kuwanikwa kunyange pamidziyo yeAroid.
-Kuonana uye webhusaiti yekuvharira zvinhu hazvisi kuwanikwa.
- Yakawanda yekunyunyuta kwevatengi iripo.
iSpyoo 7.5 / 10 -Muyedzo wakasununguka wemaawa e48.
- Iyo software inopa vhidhiyo yekufona kutarisa zvakare.
- Zvimwe zvekutanga uye goridhe zvinhu zvinowanikwa chete kumidziyo iine midzi yekuwana.
- Iyo yekutsigira system inotyisa.
StealthGenie 7.3 / 10 -Kwakakwana kune vabereki vanoda sarudzo dzepamberi dzekutarisa.
-Mutengo wakaderera zvikuru uchienzaniswa nemhando yemasevhisi anopihwa.
- Kukundikana kutevedzera zviri pamutemo zvimisikidzwa zvakasarudzika.
- Iyo app ndeye network data hogi.
- Iyo app is anorema mushandisi wesimba, uye inodhonza mudziyo bhatiri nekukurumidza.
- Unofanirwa ejele kupwanya yako iPhone kushandisa software.
RunhareSheriff 7 / 10 -FoniSheriff ndiyo mhinduro yakanaka yekutarisa vana.
-Ine kugona kutora kamera kamera snapshots.
- Iyo software inogona kureketa zvakapoteredza mudziyo pane iwe waunove iwe.
- Zvine mukana.
-Software iyi haitsigire ichangoburwa Android uye iOS shanduro.
-Webhu rinovhara zvinhu zvinoomesesa uye zvine hunyanzvi.
-Kuisa ndehurefu uye kwakaoma.
- Yakazara yemagariro enhau kuongorora hakusi.
- Live chat rutsigiro system haina kuwanikwa.
MobileSpyAgent 6.9 / 10 - Zvakanyanya nyore kushandisa.
-Zvese zvakakosha zvekuongorora zvinowanikwa.
- Zvimiro zvine mashoma.
- Inoshanda chete nemidziyo iri jailbroken (iOS) kana ine midzi yekuwana (Android).
SpyBubble 6.7 / 10 - Basic ekuongorora zvinhu anoshanda zvakakwana.
- Yakakwirira kuwiriraniswa mhando.
- Iyo software ine imwe-nguva kubhadharisa.
-Zvinhu zvemukati zvakaperera, uye software haina kupa kuchengetedzeka maficha.
- iPhone jailbreak iri inofanira.
Highster Mobile 6 / 10 - Stealth kamera inobvumira kutora mifananidzo iri kure.
- Imwe-nguva yekubhadhara.
- Upenyu hwepamoyo hukakwira pasina mutengo wakawedzerwa.
-Zvakanaka chete zvekutarisirwa kwekutanga.
-Kudzora kwevabereki hakusi uye nekudaro, haina kunaka kupenha vana.
- Haipindirani nema smartphones ese.
Iko hakuna kuperevedza kweavo conc artists munyika ino vanouya nezvirongwa zvakawandisa zvekunyengedza vanhu. Ivo, vane gehena-rakapusa pakunyengedza vanhu kuti ivo havana hanya kugadzira chikamu chidiki kubva pachigamba kuti vanzwike vakavimbika. Kana vanhu vakavatenda, ivo vanogumbura vatengi vasina mbiri. Chaizvoizvo, vanoenda kunotsvaga mari.
Vimba nesu; kana zvasvika paNhamba Yekutevera Nhamba, iyo musika haina hushoma yeakadai maon artists. Iwe ukasachengeta maziso nenzeve zvichizaruka, mikana yekuti iwewe munyengedze inogara yakakwira.
Nei tiri kutaura zvese izvi? Chii chatinoda kutaura?
Hezvino izvo zvatiri kuda kukuudza - 'chenjera nengu.' Ikozvino uye ipapo iwe uchauya uchiongorora software iyo inozoti ita zvishamiso. Makambani iwayo haakutengese chimwe chinhu kunze kwekunyepa.
Zvino mubvunzo ndowekuti, "unoziva sei mutengesi wenhema kudaro?"
Pane nzira shoma dzekuzvizivisa. Ngatitsvagei.
Mahara Mapurogiramu paGoogle Play uye App Store
Iwe unotoziva izvi, asi isu tichazoda kuzvitaura zvakare. Google Play ndiyo chitoro chekushandisa chemidziyo yeAroid. Chitoro cheappu ndicho chitoro cheapps chezvinhu zveApp.
Zvitoro izvi hazvina kushomeka kweakadai ekutevera mapurogiramu. Tsvaga zvakapusa nemazwi ekutsvaga se 'software software ye android' kana 'mobile tracking software' kana chero imwe izwi rekutsvaga raunoda. Iwe unoshamiswa kuona huwandu hwemigumisiro hwadzoka.
Iwe unofunga kuti vese vakanaka here? Kwete, hazvisi! Vazhinji vacho varipo nekuti ivo vanogadzirisa vanoda kuba ruzivo rwako kana kuisa spyware kana malware pane yako kifaa. Software rakadaro rinoda kukwidziridzwa mvumo yekushanda. Paunopa mvumo, software yacho inotanga kuita tsvina tsvina.
Zvakatoipisisa, mamwe emapurogiramu aya anouya ne-mu-ads ads. Spy software haifanire kuve nemashambadziro mavari. Ivo vanofanirwa kushanda mumanyowani mode.
Uyezve kune rimwe boka rezvirongwa zvinokunyengedza nemazita avo uye kuita kuti iwe utende kuti uri kuisa chaiyo spy software. Chokwadi ndechekuti, ivo havana. Ivo havapote. Semuenzaniso, pane app inonzi 'Fonera Recorder Spy' paGoogle Play Store.
Unotarisira chii? Unotarisira kuti app iyi ichanyora mafoni emunhu waunoda kuti afonere uye achengetedze rekodhi yefoni dzese inzvimbo yakachengeteka.
Huyai! Kuti utsvete mumwe munhu, unofanirwa kuisa software yekutsvaira panhare yemunhu waanoda. Iyo 'Call Recorder Spy' haina zvainoita zvinotevera:
Izvo hazvishande mumanyowani maitiro.
Izvo hazvirekodha mafoni uye anozvigadza paaccount account. Yese foni yakanyorwa inogara mundangariro yefoni (yemukati kana SD kadhi).
Pamusoro peiyo, ine ads!
Tora! Kupfiga imwe kana maviri mapurogiramu kuGoogle Play Store kana Apple App Store, hapana kana app kunze uko iyo ichakubatsira kuti uongorore nharembozha zvakanaka.
Zvakare, HAZVIKONZE KUTI SINGLE APP IS A SPY SOFTWARE. Ose anoshanda pachena. Zvese zvinonzi spy software pamusika zvakanakira kuteedzera nhare yako. Ivo havazopote pane zviitwa nemumwe munhu.
Remote Kuisa Zvirongwa
Isu tinoziva imwechete yekuSpy application iyo inogona kuendesa nekumusoro pane chinhu chakarukwa pasina munhu wacho kunyangwe achiziva. Icho chishandiso XNSPY. Kunyangwe XNSPY ine zvishoma. Iyo inogona kuregedza kuisa chete pane zvigadzirwa zveAndrew. Kuisirwa kure kwakadaro kunoda rubatsiro rwehunyanzvi kubva kune iyo kambani tech tech timu. Iwe haugone kuzviita uri wega. Uye, XNSPY haina kudhura. Iwe unofanirwa kubhadhara kambani yakawanda mari yekushandisa iyi application.
Chero imwe software inonzi inomira kure yekuisa mune zvese zvingangoita, yakajeka hoax. Handeyi nazvo! Kuisa Spyera software pane chero chinhu chinonongedzwa kunouya nechinhu chakakosha chinodiwa chaunoda kuve nemuviri kuwana chishandiso.
Kuisirwa kure haisiyo sarudzo kana iwe uchida kuseva mabasa emumwe munhu pafoni. Izvo zvinodaira kure kwekuisa pane chero mudziyo unonyepa nhema. Kugadziriswa kure kure hi hi-tech zvinhu, uye haungazvitore kune mashoma mabhesi.
Mutengo wenguva imwe
Chete vashoma spy software kunze uko vanouya neye-yenguva imwe mutengo. Nehurombo, izvo zvekushandisa zvese zvine mashoma muhuwandu hwezvinhu zvavanopa. Zvese zvavanoita ndezvekutanga kuongorora.
Zvakatoipisisa, kune iyo yakazara mbiri yekunyepedzera software software kunze uko iyo inozoti inokupa iwe maitiro epamberi, uye zvinoshamisa zvekuongorora zvinopesana nemutengo wenguva imwe. Vari kunyepa!
Ukangotenga kubva kwavari, zvinopera. Vanotengesa havazopinduri kumafoni ako kana matikiti ekutsigira. Kunyangwe vakapindura, havazopa chero rutsigiro rwechokwadi. Paunoda kuti udzorere mari, ivo vanozoita sekunge hausipo kana kana uripo, uri pachimiro chakasiyana zvachose, uye havagone kunzwa kuchema kwako!
Zvese zvakanaka Spy software ndeyekudyidzana uye inouya neyemuchina michina. Imwe-nguva mutengo haisi sarudzo kwavari. Kuchengeta dzakadai software kuchinjisa kunosanganisira yakawanda mutengo. Ivo vanofanirwa kubhadhara vanogadzira tekinoroji, avo vanamazvikokota (macoders), timu yekutsigira, etc. Vane mari inodzoka, uye vanokubhadhara pamwedzi wega wega kubhadhara mari dzakadai. Ehe, iwe unofanirwa kuramba uchibhadhara kuti urambe uchishandisa software yavo.
Tsika Kutarisa Chete
Rangarira kuti yega yechokwadi Spy software senge XNSPY kana mSpy ichabvumira chete hunhu kutarisa. Semuenzaniso, kana iwe uchida kuramba uchitarisa vana vako kuti vachengeteke, kana kuti zvimwe unoda kutarisisa vashandi vako kuti vadzivise kushamwaridzana - zvinangwa zvako zvine tsika. Nekudaro, kana iwe uchida kutyora kuvanzika kwemumwe munhu, semuenzaniso, mumwe wako, hazvisi tsika.
Kana iwe uchifunga kuti mumwe wako ari kuita hupombwe, uye iwe unoda kumubata iye / iye mutsvuku-ruoko, uchishandisa Spyera pafoni yemumwe wako, chiito chako hachisi chetsika. Unogona kuenda kune dzimwe nzira asi kwete Spyera.
Kunyangwe uchipinda muongororo yetsika, mutemo wenyika yako ungangoda kuti uwane mvumo yakanyorwa kubva kuvanhu vaunoda kutarisa, kunyangwe pane vana vako.
Nzira yekutaurira sei kubiridzira / kushungurudza kufona kana foni kuba / yakarasika muUSA?
Kubiridzira kana kushungurudza mafoni zvakajairika munyika yose. Iyo USA haina kumbosiyana. Kana iwe uri mugari weUnited States of America, uye iwe uri munhu akabatwa nekubiridzira kwakadai kana kushungurudza nhare, chikamu ichi chinokubatsira kunzwisisa matanho aunotora kuti udzivise kana kutaurisa mafoni akadaro. Kunze kweizvozvo, iwe unogona zvakare kuwana ruzivo rwekuti ungataure sei kuba kwefoni kana kurasikirwa kana iwe uri mugari weUS.
Pasina imwezve ado, ngatitangei.
Kubika Kubiridzira kana Kubata Nhare muUSA
Muchikamu chino tichadzidza zvinotevera:
Paramita inotsanangura runhare sekushusha.
Kuwanda kwekutambira mafona akadaro kuvamaka sevanoshusha.
Ndiani waunofanira kubata kana iwe ukagamuchira mafoni ekukushungurudza?
Kambani yako yemafoni ichakwanisa kukubatsira iwe paunogamuchira runhare runoshungurudza?
Kambani yako yemafoni, uye yekuchengetedza mutemo ichagara ichibudirira kubatsira here?
Ndezvipi zvinhu zvaungaite kuti umise kana kudzivirira kushungurudzwa kwakadaro kufona?
Shandisa Pressure Valve maitiro kana zano.
Matanho ekuchenjerera aunotora kuti udzivise mafoni ekunetswa.
Foni yako inorira asi kana wagamuchira, kune kunyarara kufa.
Zvekuita nenhare dzehunyengeri?
Paramita inotsanangura runhare sekushusha
Runhare runotorwa senge runhare runoshungurudza kana:
Mumwe munhu arikufona uye uchishandisa mutauro unonyadzisa.
Mumwe munhu ari kukudaidza uye kukutyisidzira.
Mumwe munhu ari kukudaidza uye kukutyisidzira nekufema kwakanyanya.
Mumwe munhu ari kukudaidza uye kukutyisidzira nekunyarara.
Mumwe munhu anoita foni yako ichirira zvisingaperi.
Mune mhaka iwe uri munhu akabatwa mune chero yemamiriro ezvinhu ari pamusoro apa, uri kugamuchira foni yekunetswa. Unofanira kutora matanho. Yeuka kuti kushungurudzwa mafoni kunotyisa, uye vari kudzvinyirira zvakanyanya pahutano hwako hwepfungwa. Pasina mamiriro ezvinhu iwe unofanirwa kunge akadaro mamiriro akadaro.
Iwe unofanirwa kuziva kuti nyika dzese muUSA dzinoona kufona kwakadaro kunge kusiri pamutemo. Nyika yega yega ine kodhi yayo yemirango yekufona kwakadaro. Semuenzaniso, kana iwe uchigara muCalifornia, chikamu 653m chePenal Code inobata nekudana kunetswa kwakadaro.
Kuwanda kwekutambira mafona akadaro kuvamaka sevanoshusha
Nhare dzekushungurudza dzinogara dzichityisa. Nekudaro, haumbobvumire kunze kuti mumwe munhu waunoziva (pamwe shamwari yako) anoda kutamba prank pauri. Munhu akadaro anombomira mushure mekufona kwekutanga, kana munhu iyeye anogona kukufonera kakawanda.
Iwe unofanirwa kumirira! Mirira maviri kana matatu mafoni. Kana idzo nhare dzikaramba dzichiitika, unogona kuzviona senge runhare rwekushungurudza. Isu hatisi kutaura kuti kufona kamwechete hakuzove iko kushungurudza kufona. Iyo yekutanga foni yakadaro yaunogamuchira inogona kushungurudza nehunhu.
Nehurombo, chero yako foni kambani uye kana yemunharaunda yemutemo mubatanidzwa inotora chero nhanho mune yekutanga chiitiko. Ndicho chikonzero nei uchifanira kumirira. Nzwisisa chinhu chimwe chete zvakajeka - makambani emafoni emuno akasiyana ane marongero akasiyana ekubata nenhare dzekushungurudza.
Ruzhinji rwekufona uko makambani akasiyana anofunga nezvekufona sekuti 'kushungurudza mafoni' kuchasiyana zvakanyanya. Nekudaro, kana iyo yekutanga foni yauri kugamuchira iri kutyisidzira mhuri yako kana iwe nekukuvara kwemuviri, kambani yako yemafoni inogona kutora matanho nekukurumidza.
Ndiani waunofanira kubata kana uchigamuchira mafoni ekushungurudza?
Kana iwe ukagamuchira kudana kunokushungurudza kekutanga, kuchenjera kumirira kunze kwekunge mumwe munhu akafona uye akutyisidzira nekukuvara kwemuviri. Kana kufona kwakadaro kuchiramba kuchidzokorora, chinhu chekutanga chaunofanirwa kuita ndechekuzvitaura nekambani yemunharaunda yemafoni.
Fonera yako yenzvimbo yekambani foni bhizinesi nhamba.
Tsanangura dambudziko rako kumunhu anotora foni yako.
Iye munhu wacho anozobatanidza iwe kune mumwe munhu pane 'zvigumbu zvekutsamwa.'
Kana mumiriri kubva ku'nogumbura tafura 'anotora yako foni, taura nezvedambudziko mune zvakawanda ruzivo sezvingabvira.
Mumiriri achacherekedza uye anokuzivisa iwe nzira inotevera yekuita.
Zvino, maitiro ari pamusoro apa anoshanda kana yako yemunharaunda kambani foni ine mutemo wekubata nekushungurudza mafoni. Ko kana kambani yacho isina mutemo wakadaro? Mune mamwe mazwi, chii chichaitika kana kambani ikataura kuti haina kumbobatana nefoni dzekushungurudzwa?
Ehe, aya ndiwo mamiriro anogona kuitika. Mamwe makambani anogona kuramba kuti akubatsire. Vamwe vamwe vachakukumbira kuti utaure nyaya yacho kubazi rezvemitemo renzvimbo.
Kunyunyuta kana kutaura nezvekushungurudzwa kunodaidzira kumutemo
Tisati takuudza zvekuita kana iwe ukasvika kune vanoita zvemitemo, isu tinoda kukuudza kuti mapurisa kana ekumanikidza mutemo ane zvakawanda pane ndiro yekubata uye kugadzirisa! Saka, iwe unofanirwa kuve wakanyatsojeka uye uine ruzivo nezve yako yekunyunyuta.
Usati wopinda muhofisi yebazi rezvemitemo mako, ita shuwa kuti une mhinduro kumibvunzo inotevera:
Ndeipi iri awa chaiyo yezuva iwe paunogamuchira kufona kwakadaro?
Kangani munhu asina kuzivikanwa akakufonera?
Iye munhu arikufona nekukushusha iwe uri murume here kana mukadzi?
Ndeupi rudzi rwechirevo chakashandiswa nemushungurudza?
Wakambonzwa chero ruzha rwemashure pawakagamuchira kufona?
Wainzwa kunge munhu arikufona ari pasi pesimba rechimwe chinhu (sedoro kana zvinodhaka)?
Unogona kufungidzira here zera remunhu arikufona?
Unogona here kufunga nezvemumwe munhu anogona kukushusha kana kuda kukuvadza?
Ko foni yako kana yefone ID mudziyo inoratidza nhamba kubva kwaunogamuchira mafoni?
Mapurisa anotora yako report otanga kuferefeta nemazvo. Asi, kana iwe usingakwanise kupa yakawanda seyenzera sezvinobvira, kuongorora kunogona kutora nguva yakareba.
Kufunga kuti kambani yako yefoni ine hurongwa hwekubatsira vanhu vari kuwana mafoni ekushungurudza, chinhu chekutanga chichaitwa nekambani kubvunza nezvekuwanda kwemafoni aunogamuchira. Makambani akasiyana ane reseti rakazara renongedzo izvo zvichakuudza nhanho iwe dzaunoda kutora kubva kumagumo ako kambani isati yakubatsira.
Kana kambani yako yemafoni ikasarudza kukubatsira nemafoni anotyisidzira (sekutyisidzira kwehupenyu kana kutyisidzira kwezvinhu), kambani inogona kusarudza kumisikidza. Kambani yako yemafoni ichagara yakateya musungo pane yefoni foni yako. Iyo kambani inogona kutsvaga iyo nhamba kubva kwaunogamuchira inotyisidzira mafoni uchishandisa muteyo wavakaisa.
Nekudaro, kuti chiteyeso chishande nemazvo, iwe unofanirwa kuchengeta mutsetse, kuwanda nenguva, uye misi yekufona kwekushungurudzwa kwakadaro. Kazhinji, kambani yemafoni inoisa musungo kwemavhiki maviri. Izvi zvinoreva kuti kambani yefoni inofanira kuziva nguva yekuisa musungo.
Alternately, iwe unogona zvakare kushandisa sevhisi seChipo Trace. Iyi sevhisi inokubvumira kuti uongorore nhamba iyo yaunogashira inoshungurudza mafoni nyore. Iwe haufanire kuchengetedza danda rekushungurudza mafoni aunogamuchira. Pangosvika mushure mekugamuchira foni yakadaro, rovera * 57 pafoni yako (kana iwe uri mugari weCalifornia). Iyo kodhi inogona kusiyana zvichienderana nedunhu rako. Call Trace ibasa remunharaunda, uye nekudaro, nzira yarinoshanda inogona kusiana munzvimbo nenzvimbo. Ive neshuwa yekubvunza yako kambani foni nezvesevhisi.
Zvinhu zvishoma zvaunofanira kucherechedza:
Fonera Trace ibasa rakabhadharwa. Ehe, iwe unofanirwa kubhadhara kana iwe uchida kuishandisa.
Kambani yemafoni yako haigovana chero ruzivo rwavanounganidza vachishandisa Call Trace kana 'musungo' newe. Ruzivo rwunopihwa kumatare rinosimbisa mutemo.
Mapurisa achatora huwandu uite kuferefetwa kunodiwa. Kana mapurisa akaona kuti iye ari kungoridza pranks, mapurisa anoyambira munhu wacho omuregedza.
Kana mapurisa akaona kuti munhu ari kukufonera anotyisidzira zvechokwadi, mapurisa anogona kusunga munhu wacho otora danho rakakodzera.
Aihwa! Kambani yako yemafoni uye kunyangwe vanoisikidza mutemo vanogona kutadza kukubatsira dzimwe nguva. Kana munhu anoshusha ainehungwaru uye achishandisa imba yekufonera yeruzhinji, kana anoshandisa akawanda mafoni mafoni, zvinogona kuoma kune vese kambani yefoni nekumanikidza mutemo kutevedzera munhu iyeye.
Chinhu chakanaka ndechekuti vashandi vemitemo vanoshandisa zviwanikwa zvakawanda uye manomano akawanda emikono yavo. Ivo vanowanzo wana mhoswa asi, sezvakambotaurwa, havagaro kuvimbisa 100% budiriro. Kana kwete kambani yako yemafoni uye kana kusimbisa mutemo kunogona kukubatsira, iwe unogona kuenda kune inotevera sarudzo:
Chinja nhamba yako yefoni zvizere. Kumbira kambani yako yemafoni kuti iite, uye ivo vanozozviita nemufaro.
Kumbira foni yako kambani kuti ikupe iwe nhamba isina kunyorwa kana isina kunyorwa. Kana vanhu vasingawani nhamba yako, havagone kukushusha nefoni dzakadai.
Dzimwe nguva zviito zvaunotora zvinogona kukwana kugumisa kufona kwakadaro. Pane zvishoma zvinhu izvo zvaunofanira kugara uchiedza:
Paunogamuchira runhare, uye iwe uchinzwisisa kuti iko kushungurudza foni, simudza runhare. Iko hakuna chikonzero nei iwe uchifanira kuita mune chero hurukuro neuyo anofona.
Iwe unogona kumisikidza voicemail yekufona kwese kubva kunhamba dzese dzisingazvizarurire pachavo pane munhu anofona ID zvishandiso. Semuenzaniso, unogona kusiya tsamba yezwi yakadai se: "Sezvo tiri kugamuchira foni yekunetswa kubva kunhamba dzisina kuzivikanwa, hatigone kupindura kufona izvozvi." Kana iwe uri chaiye anodaidzira, tisiyire meseji, uye isu tichadzoka kwauri. Ukatadza kusiira meseji kwatiri, tichafungidzira kuti ndiwe unogumbura munhu anodana. Kubata foni kuri kuitika, uye kambani yemafoni iri kutsvaga foni yako. "
Paunogamuchira runhare rwakadai, fungidzira kuti une mumwe munhu ari pamhepo ari kutsvaga kufona sezvazviri kuitika uye taura mazwi anoti, 'Opereta, iyi ndiyo foni yandakakuudza nezvayo, ndapota tsvaga.' Paunenge iwe uchinge wataura mazwi aya, chinamira.
Chero ani ari kukushusha (chaiye kana prank) achatya kubatwa. Matanho aya aunotora anogona kuvaodza mwoyo kubva kukudaidza zvekare.
Shandisa Pressure Valve maitiro kana zano
Nhare dzinogumbura dzauri kugamuchira dzinogona kungove chikamu chechirongwa chakakura sekukambaira. Stalkers inogona kutyisidzira. Kunyangwe zvisiri nyore kuti unzwisise kuti kana munhu asiriye ari shure kwako usipo, pane matanho ekudzivirira aunogona kugara uchitora. Matanho iwayo anosanganisira:
Tora huwandu hutsva. Ipa nhamba chete kune Iwo akavimbika emhuri emhuri, uye shamwari.
Usashandise iyo nhamba kune chero chinhu chakadai seofficial Bureau, kiredhiti kambani kambani, kambani inishuwarenzi, kubhengi, nezvimwe.
Ita shuwa kuti huwandu hutsva hwaunotora hauna kunyorwa. Iwe unofanirwa kunyatso bvunza kambani yako yefoni kuti ikupe nhamba isina kunyorwa.
Ita shuwa yekuisa mapassword kune ako mafoni account (senge mbozhanhare, kureba, uye yemuno).
Nyora tsamba kukambani yako yemafoni uchitsanangura pachena kuti kambani haifanire kuburitsa ruzivo pa account account yako kune chero ani kunze kwako. Kunyangwe painenge iri kukumbira ruzivo, kambani inofanirwa kukubvunza nezve password iyo yawakaisa pane ako mafoni account.
Chengeta imwe nhamba asi usashandise. Dzima mhete yaro, uye uiise pakurekodha. Bvumira anotambudza kuti afone nhamba yacho sezvazvinogona. Rekodha zvese kuunganidza ruzivo uye humbowo. Unogona kuendesa ruzivo kumapurisa kuti iongororwe.
Matanho ekuchenjerera aunotora kuti udzivise mafoni ekunetswa
Nhare dzekushungurudza dzinogona kuuya chero nguva. Zvakajairika kugamuchira mafoni kubva kune vasingazivikanwe vafoni vanozonyepedzera kunge vanobva kune mumwe anobatsira webasa. Vakadaidzira vakadaro, muzita rekusimbisa, vanokubvunza kuti vakadana nhamba ipi.
Usambofa wakapa chero ruzivo kune chero munhu asingazivikanwe anodaidzira Anodaidza wacho anogona kunge aine pfungwa dzakaipa. Semuenzaniso, anofona anogona kunge achironga zvekuba kana kuba uye anoda kuziva kero yako. Panogona kuve nedzimwe mhosva zhinji dzinotyisa mupfungwa dzadzo. Ive nekuchengera pamusoro pekusafumura chero ruzivo.
Kana iwe uine vana kumba, vadzidzise kuti vasazivisa chero ani ruzivo. Vana havana mhosva uye vanotambura. Ivo vanokwanisa kusiya ruzivo.
Foni yako inorira asi kana wagamuchira runhare, pane kunyarara kufa
Zvinhu zviviri zvinogona kuitika mune ino mamiriro. Kutanga, mubirizi ari kukudaidza kuti uone kana paine munhu ari pamba kana kwete. Chekutanga sarudzo ndiyo inotyisa mamiriro. Chepiri, uri kugamuchira mafoni kubva kumadhisheni edhivhari yekuteedzera michina iyo inoshandisa tekinoroji inonzi 'kufanozivisa kunyevera.'
Izvo zvinoitika, mune ino kesi, ndezvekuti kana iwe usina kunyoresa ku'National Usashevedze Registry, 'telemarketer ichaedza kukufonera. Ivo vachashandisa makomputa kufonera nhamba zhinji nekukurumidza zvinoteedzana. Kana nhamba ikabatana uye munhu akagashira runhare, komputa inoedza pakarepo kubatanidza kufona kumumiriri wekufonera. Kana vamiriri vese vakabatikana, zvese zvauchanzwa inyaradzo yakafa. Iwe uchagamuchira runhare rwakasiiwa. Komputa ichasiya runhare, uye kumira kuyedza kukubatanidza iwe kune telemarketer.
Kubva mumaonero ako, paunonzwa chimwe chinhu kunze kwekunyarara chakafa, uchavhunduka. Zviri muropa.
Chinhu chakanakira chaunogona kuita pano kufonera kambani yako yemunharaunda kukumbira 'musungo' chero iwe uri kuwana yakawandisa yemafoni akanyarara. Iyo kambani ichaita uye nekutsvaga iyo isina kuzivikanwa telemarketing kambani. Kambani yako yemafoni ikangoona isingabvumirwi telefoni, vanokumbira iyo kambani yekutengesa telefoni kuti isa nhamba yako pane iyo nhamba inonzi - 'usafone.' Iwe ucharega kugamuchira mafoni.
Kana kambani yemafoni ikaona kuti mbozhanhare dzakanyarara dzinobva kune vanhu vane vavariro dzakaipa, kambani yako yemafoni ichaendesa nhamba kumapurisa.
Iko hakuna mutsauko wakakwana pamatanho aunotora iwe paunogashira runhare rwekunyepa. Iwe unogona kugara uchiudza zvakafanana kune yako kambani yekufonera uyo anokupa zano pamatanho aunofanirwa kutora. Iyo kambani yemafoni inogona kunyange kutaurira vanyengeri vakadaro kune vanoita zvemitemo.
Kune mafoni ekubiridzira, chinhu chakanakisa kuita kuchenjera. Usape chero ruzivo (rwemari kana neimwe nzira) kuna ani zvake anodaidza uye anobvunza zvakafanana. Rangarira kuti mabhangi nemamwe masangano emari haabvunze ruzivo rwakakomba. Vanotova neruzivo rwavanoda. Masangano ezvemari anoramba achitumira ziviso kwauri nezve kusagovera chero ruzivo rwemari senge kiredhiti kadhi rechikwereti, nhamba yemakadhi echikwereti, nhamba yeakaundi yekubhengi, nhamba yekuchengetedza munharaunda, nezvimwe kune chero munhu anoti ari kubva kusangano.
Kana iwe uri kunge uri kubatwa nevanyengeri vakadaro, chinogara chiri mhosva yako nekuti hausi kungwarira zvakakwana. Kana iwe ukava munhu akabatwa - wobva waenda kumatare ezvemitemo uye uchipa ruzivo, wobvunza kuongororwa. Iyo kambani yefoni inogona kubatsira nekutsvaga iyo nhamba iyo inoshandiswa neyekunyepedzera kukunyengedza.
Kubika Kubiwa Kwefoni kana Kurasikirwa kwefoni muUSA
Kana iwe ukarasikirwa nefoni yako kana uchifunga kuti mumwe munhu akaba foni yako, uye uri mugari wemuUSA, usatarisira chimwe chinhu chakakosha icho chinokubatsira kuti uwane foni yako zvemashiripiti. Zvese zvaunogona kuita kana ukarasikirwa nefoni yako kana mumwe munhu akaba foni yako kutanga kuedza kutsvaga foni.
Kune masevhisi akadai saGoogle 'Tsvaga runhare rwangu' kana Apple's 'Tsvaga Runhare rwangu' iyo inogona kukubatsira kuti uwane yako foni nzvimbo kana kukubvumira kukiya kure foni yako kana kudzima data rese rine foni yako. Takakurukura zvakadzama nezvekuita uku kutanga kwechinyorwa chino.
Rubatsiro kubva kuMutemo Kusimbisa
Muchiitiko kana iwe uchinetseka nezve rubatsiro kubva kune vanoita mutemo, zvinogona kunge zvichikuodza mwoyo. Usafunga nezvekupinda chiteshi chemapurisa kusvikira iwe uine chokwadi chekuti munhu akaba foni yako.
Kana iwe uine zana remazana muzana ekuziva kuti munhu abira foni yako, unofanirwa kuudza mapurisa. Ehe, iwe unofanirwa kuvapa ruzivo rwakadai:
Model uye kugadzira kwefoni.
IMEI nhamba yefoni yako.
Izita remunhu anofungidzirwa (kana aripo).
Edza kupa mapurisa zano rakaoma renzvimbo yazvino yefoni (unofanirwa kuedza masevhisi seGoogle neApple's Tsvaga Runhare rwangu maficha).
Paunenge uchinge uine zvese zvese ruzivo, zvipe ivo kune vanoita zvemitemo. Kana vakatora mushumo, iwe unofanirwa kutora kopi imwechete. Icho chikonzero chiri nyore. Iwe uchada kopi yemapurisa report kana uine foni inishuwarenzi, uye iwe uchida kuisirwa mari mubumbiro iri.
Kushuma Mupi Webasa
Kushuma kumupi webasa chinhu chaunofanira kugara uchiita. Yese kambani kambani ine iyi sarudzo. Kunyangwe iwe uri kushandisa Verizon, T-Mobile, Sprint, kana AT&T, shanyira avo akasiyana mawebhusaiti. Iwe uchawana sarudzo dzekumhan'ara nhare dzakabiwa.
Wese webasa wese anomisa masevhisi ese kana vangogamuchira chakabiwa chefoni. Vachaita izvi kudzivirira kushandiswa zvisizvo kwefoni foni. Mamwe makambani anodzivirira mbavha kuti isashandise runhare rwakabiwa rwema network avo. Ndiwo akanakisa avachaita.
Ehezve, kana iwe ukakwanisa kuwana mudziyo wako, unogona kufonera back service uye uchikumbira kuti vadzorese ese masevhisi
Mamwe Matipi Akakosha
Rangarira kuti rombo rakaipa rinogona kukuwira chero nguva pane chero zuva. Iwe haugone kuva nechokwadi chekuti hauzomborasikirwa nefoni yako kana kuti hapana anozomboba foni yako. Nekudaro, nguva dzose zviri nani kugara wakachengeteka pane kuva nekuzvidemba pane imwe nguva yakazotevera. Gadzirira zvakaipisisa. Ita shuwa kuti kana uchitenga foni nyowani, unotora zvinotevera zvinotevera:
Chengetedza zvese zvakapetwa zvakachengeteka. Kune ruzivo rwakawanda ipapo.
Chengetedza nzvimbo inowanikwa sefoni yako yakavhurwa.
Isa imwe yekutevera app senge Yakarasika Android kana Google's Tsvaga Mudziyo Wangu.
Kana iwe uine mari, funga nezvekutenga software yeSpy uye uiise pafoni yako. Chaizvoizvo, zvipire pachako. Kana mumwe munhu akaba foni yako, unogona kushandisa paintaneti service yeSpy software kuongorora foni yako chaizvo kana kunyatso chengetedza foni yako iri kure. Iwe unogonazve kuwana ziviso ipapo kana foni yako ikasiya imwe yakasarudzika (chaiyo fenzi) kuitira kuti iwe ugoziva kuti munhu akaba foni yako kana mumwe munhu atora nenjodzi foni yako.
Tora! Nhamba Yekufambiswa Kwefoni haisi chinhu chevhareji Joes (vanhuwo zvavo). Iyo yakanyanya kunaka iwe yaunokwanisa kuita kutora nzvimbo inofungidzirwa yenhamba kana ukaitika uchigamuchira nhare dzinoshungurudza, kana prank kufona, kana kubiridzira kufona. Kana zvinhu zviri kutenderera kunze kweruoko, isa kunyunyuta nemapurisa kana cybercrime chikamu.
Vashandi vemitemo chete ndivo vanokwanisa kutsvaga nhamba dzefoni, uyezve kana vachifunga kuti uri munhu akapara mhosva. Usakanganwa kuti muIndia, hazvisi pamutemo kuti vagari vemo vatevedze nhamba yemumwe munhu. Kana iwe ukaita seunopaza uye unokwanisa kuongorora nharembozha yako isiri yako, uri kuita hunyanzvi. Nekufamba kwenguva, mutemo wekuita mutemo unenge uri pamuswe wako.
Chii chinonzi IMEI nhamba uye Ungawana sei yako
Filed Under: the sporingssoftware uko sporer ihmiset